Hargeysa: In ka badan 10 qof oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay meel suuq ah. – Radio Daljir
Abriil 5, 2011 12:00 b 0
Hargeysa, April 05 – Ugu yaraan 21 qof oo shacab ah ayay dhaawacyo kala duwan ka soo gaadheen qarax bambaano oo saaka ka dhacay badhtamaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.
Dhibaatada qaraxan ayaa dhacday markii nin waalan oo bambo gacameed ku hubaysnaa uu ku walwaalay suuqa badhtamaha Hargeysa, xilligaas oo dadku aad ugu badnaayeen suuqa. Dadka dhaawacu soo gaaray ayaa u badan haween suuqa ka adeeganayay.
Warar laga helayo cusbitalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in dadka dhaawacyadu ay soo gaadheen qaarkood ay xaaladdoodu culustahay, kuwaas oo uu ka mid yahay ninkii bambo gacameedka dadka ku waxyeelleeyey, ee la sheegey in uu maskaxda ka xanuusanayay.
Qaar ka mid ah ehellada dadka waxyeelladu ay soo gaadhay oo ay Daljir la xidhiidhay ayaa ku dhaleeceeyey ciidamada ammaanka ee Somaliland ogaansho la?aantooda qof waalan oo magaalada ku dhex hubaysnaa. Wararka qaar ayaa tilmaamaya in ninka waxyeellada gaystay meelo ka mid ah magaalada lagu arkay maalmihii tagay isagoo bambaanadaasi faraqa ku sitay.
Qaraxan ayaa Hargeysa ka dhacay xilli shalay magaaladaas si wayn looga xusay maalinta caalamiga ah ee xakamaynta miinooyinka iyo waxyaabaha kale ee qarxa.
Weriye Barkhad Kaariye oo ku sugan Hargeysa ayaan ka waraysanay khasaaraha qaraxa:
Daljir, Gaalkacyo. http://daljir.com/
Warbixin: Shirka Nairobi ee wada-tashiga iyo aragtida dhinacyada.